Manidina amin'ny A3 Airbus tsy misy mpanamory: vita ny sidina fitsapana feno
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Manidina amin'ny A3 Airbus tsy misy mpanamory: vita ny sidina fitsapana feno
Febroary 2, 2018
Vahana, ilay fiaramanidina mandeha amin'ny herinaratra, mandeha irery, VTOL avy any A³ avy amin'ny Airbus, dia nanambara ny fahombiazan'ny fitsapana fiaramanidina feno voalohany, nahatratra 5 metatra (16 metatra) talohan'ny nidina soa aman-tsara. Ny fitsapana dia vita tamin'ny 8:52 maraina Pacific tamin'ny 31 Janoary 2018 tao amin'ny Pendleton UAS Range any Pendleton, Oregon. Ny sidina voalohany, miaraka amin'ny faharetana 53 segondra, dia naka-tena tanteraka ary nahavita sidina faharoa ny fiara ny ampitson'io.
"Androany isika dia mankalaza zava-bita lehibe amin'ny fanavaozana ny aérospace," hoy i Zach Lovering, Project Executive ao Vahana. “Tao anatin'ny roa taona monja dia naka sary tamin'ny servieta napkin i Vahana ary nanamboatra fiaramanidina feno fiaramanidina tena feno ary nahavita ny sidina voalohany nataony. Faly ny ekipanay noho ny fanampiana azonay tamin'i A³ sy ny fianakavian'i Airbus, ary koa ireo mpiara-miasa aminay, anisan'izany ny MTSI sy ny Pendleton UAS Range. ”
Vahana dia tetik'asa novolavola tao amin'ny A³, poste post of Silbus Valley of Airbus. A³ dia mamela ny fidirana amina talenta sy hevitra tokana, fotoana iaraha-miasa vaovao, ary fanatanterahana haingana. Vahana dia mikendry ny hamongotra ny sidina manokana ary hamaly ny filàna fivezivezena an-tanan-dehibe amin'ny alàlan'ny fampiasana ireo haitao farany amin'ny fampiroboroboana herinaratra, fitahirizana angovo ary fahitana amin'ny masinina.
“Ny sidina voalohany an'i Vahana dia mampiseho ny fahaizan'i Airbus manokana mitady hevitra be fatra-paniry laza haingana, nefa tsy manimba ny kalitao sy ny fiarovana izay fantatry ny orinasa. Ho an'i A³, manaporofo izany fa afaka mitondra fanavaozana misy dikany amin'ny fandaharam-potoanan'ny tetikasa mahery setra izahay, mba hanomezana tombony tena fifaninanana ho an'ny Airbus, "hoy i Rodin Lyasoff, CEO A³ ary Mpanatanteraka Tetikasa taloha tao Vahana. "Ny ifantohanay izao dia ny fankalazana ny asan'ny ekipa Vahana tsy misy reraka ary mitazona hatrany ny tanjaky ny zava-bita."
Vahana dia manararaotra ny fahaizany mandeha irery mba hiasa tsy misy mpandeha. Taorian'ireto sidina mahomby ireto dia hitodika any amin'ny fanandramana fanampiny ny ekipa, ao anatin'izany ny tetezamita sy ny sidina mandroso.